चिकित्सकबाट पुष्टि, चार वर्षीय बालकले गरे बलात्कार ! – Saurahaonline.com
चिकित्सकबाट पुष्टि, चार वर्षीय बालकले गरे बलात्कार !
नयाँ दिल्ली, मंसिर ७ । दैनिक बलात्कारका घटना प्रकाशमा आइरहेका हुन्छन् । विश्वमै बलात्कारका अनेक घटना प्रकाशमा आउने गर्दछन् तर भारतमा हालै चार वर्षीय बालकले बलात्कार गरेको अनौठो घटना प्रकाशमा आएको छ ।
भारतको कानूनअनुसार प्रहरीले ७ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कारवाही गर्न मिल्दैन । उक्त उमेर समूहका बालबालिकाको दिमाग अपराध गर्ने हदसम्म विकसित नभइसक्ने ठहर गर्दै कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । तर यो उजुरी सम्बन्धमा प्रहरीले कस्तो कारवाही गर्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । (एजेन्सी)